Mashiinka Barafka Flake, Mashiinka Barafka Tube, Mashiinka Barafka ee Iibinta - Nidaamyada Ice Ice
Kuwani waa alaabtii ugu dambeysay ee on-line-ka ee leh shaqooyin dhameystiran iyo hubinta tayada
Waxaa la aasaasay 2006
Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd waxaa laga helay 2006. Waxay diiradda saareysay hagaajinta tiknoolajiyada mashiinka barafka xitaa tan iyo, oo ay ku jiraan mashiinka barafka flake, mashiinka barafka tuubada, mashiinka barafka barafka iyo wixii la mid ah.
Waxaan ka shaqeyneynaa OEM / ODM shaqooyin aad u fiican oo loogu talagalay uumi bixiyeyaasha barafka, mashiinnada barafka jajaban, mashiinnada barafka tuubada, mashiinnada barafka. Wax soo saarkayagu waxaa si diiran u soo dhawaynaya la-hawlgalayaashayada ganacsiga adduunka oo dhan.
Waxaan ku soo saarnaa uumiyaha barafka jaban ee Shiinaha, waxaanan ka iibinnaa uumi bixiyeyaasha barafka inta badan shirkadaha kale ee mashiinnada barafka ee Shiinaha, kuwaas oo isku xira uumbiyeyaasha Herbin iyo cutubyadooda qaboojinta si ay u sameeyaan mashiinnada barafka jaban ee waddamada kala duwan ee adduunka oo idil.
In kabadan 60% mashiinada barafka dufanka leh ee Shiinaha waxaa lagu qalabeeyaa uumeeyeyaasha barafka ee Herbin flake.
Uumeeyeyaasha barafka ku shaqeeya ee loo yaqaan 'Herbin flake evaporators' ayaa durbaba adduunka looga isticmaalay si ballaaran.
Warshaddayda barafka cad ee 2T / maalin waxay ku qalabeysan tahay weel lagu keydiyo barafka 500kg. Qashin-barafkaasi wuxuu keydin karaa 500kg oo jajab baraf ah. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa haanta weyn ee barafka lagu keydiyo, ama qolka barafka. Qolka weyn ee barafka, waxaan u adeegsan doonnaa biraha birta ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Qaboobaha barafku wuxuu ku dhacaa qolka barafka oo si toos ah ayuu gudaha loogu ilaaliyaa Waa kuwan sawir gacmeedka si aan u muujiyo makiinadeyda barafka ee 2T / maalin leh ...
Heerkeyga 3T / maalin ee barafka jilicsan waxaa ku qalabeysan 1500kg weelka barafka lagu keydiyo. Qashin-barafkaasi wuxuu keydin karaa 1500kg oo jajab baraf ah. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa haanta weyn ee barafka lagu keydiyo, ama qolka barafka. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhammaan barafleyda lagu sameeyo waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 3T / maalin. Waxaan u adeegsan doonnaa qaab bir ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Barafka barafka wuxuu ku dhacaa qolka barafka waana la hayaa ...
Warshadayda 5T / day ee barafka flake ah waxay ku qalabeysan tahay 2500kg weelka barafka lagu keydiyo. Qashinkaas barafku wuxuu keydin karaa 2500kg oo jajab baraf ah. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhammaan barafleyda uu sameeyo waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 5T / maalin. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa qolal baraf ka waaweyn. Waxaan u adeegsan doonnaa qaab bir ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Barafka barafku wuxuu ku dhacaa qolka barafka oo waxaa lagu hayaa gudaha-buuxa otoma ...
Warshadayda caadiga ah ee 20T / day flake baraf ah waxaa lagu qalabeeyaa 10,000kg haanta barafka lagu keydiyo. Qashinkaas barafka ah wuxuu keydin karaa 10,000kg oo jajab baraf ah. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhamaan barafleyda ay sameyso waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 20T / maalin. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa qolal baraf ka waaweyn. Waxaan u adeegsan doonnaa qaab bir ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Fataqadaha barafka waxay ku dhacaan qolka barafka oo gudaha ayaa lagu hayaa -...
Heerkeyga barafka flat 30T / maalin ee caadiga ah waxaa ku qalabeysan weel baraf lagu keydiyo oo ah 15,000kg. Qashin-barafkaasi wuxuu keydin karaa 15,000kgs oo jajab baraf ah. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhamaan barafleyda uu sameeyo waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 30T / maalin. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa qolal baraf ka waaweyn. Waxaan u adeegsan doonnaa qaab bir ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Fataqadaha barafka waxay ku dhacaan qolka barafka oo gudaha ayaa lagu hayaa -...
KU SAABSAN US SES BARKA NETWORK NAGALA SOO XIRIIR XAQA SHAQAALAHA US